Xilliga shukaansiga: Marka lamaanaha ay nasanayaan, iskaabuladana wax deydeyayaan - BBC News Somali
Xilliga shukaansiga: Marka lamaanaha ay nasanayaan, iskaabuladana wax deydeyayaan
Marka ay bilaha qaboobaha bilowdaan... waxaa la joogaa xilliga baadi-goobka
Xagaagu waa xilliga qabowga iyo dabaal-degyada ee dalalka Yurub, iyadoo maalmaha waqtigoodu dheer yahay ee kuleylaha, lagu qaato beeraha laguna nasto, halka dadka qaarna... ay iskaabulo iska ahaadaan oo aysan garaneyn waxa ay sameeyaan.
Balse marka la gaaro bisha September, markaas oo dalalka Yurub qaarkood ay saacadaha maalinta ay aad u yar yihiin, cimiladuna ay qabow dahay, waxay dadka qaar u baahdaan qof ay waqtiga la qaataan, waana marka ay ku soo dhacdo in ay guursadaan.
Waxaa markaas la joogaa "xilliga baadi-goobka" ama "shukaansiga" - waa marka dadka sida caadiga ah ku faraxsan doobnimada ay go'aansadaan in ay lammaane yeeshaan.
Xigashada Sawirka, Shutterstock
Waxaa laga yaabaa in kaftan loo qaato - balse baaritaan ayaa lagu sameeyay baraha shukaasniga ee xilliyadan oo kale.
App-ka la iska shukaansado ee Yurub ee lagu magacaabo Bumble ayaa sheegay in macaamiil badan ay ku soo biiraan bilaha November iyo January marka la barbardhiga sannadka intiisa kale.
Bumble ayaa sheegay in dad badan ay ku soo biiraan November iyo January
Sheeekooyinka naxdinta leh ee ku saabsan dumarka loo dilay jaceyl dartiis
Waxaan la kulannay labo qof oo xilliga baadi-goobka ama shukaansi doonka ka faa'iideystay.
Elena waa 26 sano jir, waxayna dhowaan baraha la iska shukaansado ka hesho lammaane.
"Waxaan hadda la socdaa qof aan isku barannay bar la iska shukaansado labo bilood kahor. Bilihii September iyo October ayaan baadi-goobka bilaabay, anigoo og inay soo socdaan bilaha qabowga," ayey tiri.
Waxay sheegtay inuu jiro cadaadis qarsoon oo kugu qasbaya inaad xilligan qof xiriir la yeelato, isla markaana baraha bulshada ay arrintaasi saameyn ku leeyihiin.
Kate Mansfield waa tababare arrimaha shukaansiga iyo xiriirka, waxayna sheegtay in xilligan oo kale ay dadka ku adag tahay inay iskaabulo sii ahaadaan.
"Xilliyada feestada, sida ciidda masiixiyadda iyo Sanadka Cusub, cidlo ayaad dareemeysaa haddii aadan lammaane heysan, halka xagaaga aadan dareemeynin maaddaama dadku ay dibadda u soo wada baxayaan," ayay BBC-da u sheegtay.
Waxay sheegtay in ay jiraan waxyaabo kale oo qofka uu sameyn karo, haddii uu cidlo dareemo.
"Haddii aad kelinimo dareemeyso dibadda ayaad u bixi kartaa si aad dadka kale u caawiso.
"Waxaa laga yaabaa in aad dad kale la kulanto isla markaana ay kaa ba'do kelinimada."
Qof kale oo soo arkay faa'iidada iyo khasaaraha xilliga baadi-goobka waa Kaylee Golding oo 21 jir ah.
Kaylee, oo dhowaan sheekadeeda ka sheegtay 1Xtra Talks, ayaa xustay inay macquul tahay in lammaanaha xiriirka loo jaro marka laga baxo qaboobaha, sababtuna ay tahay inaysan micno badan lahayn in xagaaga bannaanka loo baxo adiga oo uu lammaane kula socdo.
"Waxaan u maleynayaa dadka waxay doonayaan in ay dalxiis aadaan oo ay wakhti fiican naftooda la soo qaataan," ayay tiri.
Sanadihii la soo dhaafay, dadka isticmaala baraha bulshada waxay ku kaftamayeen in xilliga shukaansi doonka loogu talo-galay helidda qof kaa gudbiya bilaha qaboobaha kuna gaarsiiya xilliga kuleylaha, kuna geeya Winter Wonderland oo ku taalla Hyde Park, London.
Waxay sheegtay inuu jiro "cadaadis badan" oo ku saabsan in aad hesho qof aad sawirro isla soo gashaan oo aad soo dhigtaan Instagram-ka.
5 Nofembar 2019
Dhanka taban ee rumaysiga jacaylka dhabta ah
"Jihaadka jaceylka" oo Hindiya ku soo badanaya
10 Jannaayo 2018
Sida ay ku timid maalinta Jacaylka adduunka ee "Valentine's day"